SHELTIE MUFUDZI IMBWA INOBEREKA RUZIVO UYE MIFANANIDZO - IMBWA
Sheltie Mufudzi Imbwa Inobereka Ruzivo uye Mifananidzo
Shetland Sheepdog / ChiGerman Mufudzi Akavhenganiswa Mhando Dzembwa
'Sheeno ane makore manomwe, 75lb Mufudzi wechiGerman / Sheltie sanganisa. Isu takamugamuchira iye pamasvondo masere ekuberekwa kubva kune ane basa rekurera uyo aida kuvimbika, ungwaru, uye kutaridzika kweaya maviri makuru marudzi! Akaita basa rakanaka naSheeno wedu! Akangwara uye akavimbika. Anoda rudo uye haatombosiya zvangu. Ane hunyoro hwakadzikama uye ari mukuru nevana . Pazera ramakore manomwe anoramba achida kutamba uye kutamba sembwanana, asi kamwe mukati imo mubhedha wakazara mbatatisi! '
Sheltie Mufudzi haisi imbwa yakachena. Muchinjikwa pakati pe Shetland Gwai uye iyo Mufudzi wechiGerman . Nzira yakanakisa yekuziva hunhu hwerudzi rwakavhenganiswa ndeyekutarisa mhando dzese mumuchinjikwa uye uzive kuti iwe unogona kuwana chero musanganiswa wechero hunhu hunowanikwa mune chero rudzi. Haasi ese eaya akagadzika imbwa dzakauchikwa dziri kuberekwa dziri 50% dzakachena kusvika 50% dzakachena. Zvakajairika kuti vafudzi vaberekane mizhinji-chizvarwa michinjikwa .
Sheeno iyo Mufudzi wechiGerman / Sheltie sanganisa pazera remakore manomwe
dema lab uye terrier musanganiswa
Sheeno iyo Mufudzi wechiGerman / Sheltie sanganisa sembwanana
'Nikki ane makore matatu Mufudzi wechiGerman / Sheltie sanganisa. Anorema anenge 60 lbs. uye angangoita mashanu tsoka kana iye akamira pamusana pake paws. Ndiye imbwa ine hushamwari yandakambosangana nayo uye anoda munhu wese iye akanaka nevana vadiki uye kunyange vacheche. Haambogunun'una uye anongohukura pamatsindi kana dzimwe mhuka dzakatenderedza kana ari kuseri kwemba, haamboruma. Anoda kutamba nedzimwe imbwa uye akanaka kwazvo nazvo katsi . Ano akanaka hyper uye inoda kumhanya-mhanya kwakawanda, asi kana yabuda chete simba rayo inodzikama uye inongoda kugara kana kurara padivi pako uye kupurudzirwa. Akangwara kwazvo uye akadzidza mirairo yake yese uye kunyangwe mamwe manomano mukati memwedzi yekutanga ye3-4 yandaive naye iye akadzidza zita rake musi iwoyo wandakamuwana. Anoda nguva yechando uye anotamba muchando. '
Nikki weGerman Mufudzi / Sheltie musanganiswa pazera remakore matatu
inonzi chii hanzi yechidiki inonzi
Nikki weGerman Mufudzi / Sheltie musanganiswa pazera remakore matatu kunze kwechando
Chinyorwa cheGerman Mufudzi Sanganisa Inobereka Imbwa
Chinyorwa cheShetland Sheepdog Sanganisa Inobereka Imbwa
imbwa dzinoratidzika kunge irish setter
imbwa yemombe yeAustralia uye pitbull musanganiswa
w goebel w germany zvivezwa
goridhe retriever inobereka iyo inogara diki
Mwedzi miviri yekare rednose pitbull
chihuahua rat terrier sanganisa mbwanana